Ma Tani Future The of Work? - Rule News
Ma Tani Future The of Work?
CSIRO hay'adda sayniska Australia ayaa sheegay in goobaha shaqada ay noqon doontaa kordheysa dijital diirada iyo si toos. Yaa doonaya inuu noqdo ah 'ilaaliyaha online'?
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Ma this mustaqbalka shaqo? Culumada saynisku waxay saadaalinayaan oo shaqooyin weli u furnaan doonaa dadka ee 2035” waxaa qoray Paul Karp, waayo theguardian.com on Friday 26 February 2016 05.41 UTC
Shaqaalaha raadinaya shaqo 2035 tixgelin laga yaabaa waxarashada sida wadayaasha gaadiidka-hago ama sugayaal online.
Kuwa yihiin labo ka mid ah shaqooyinka mustaqbalka soo jeediyay in warbixin by CSIRO ah in gooldhalinta 20-sano-rogga ee sii kordheysa dijital ah diiradda iyo iswada goobaha shaqada Australia.
Related: Is macnaheedu noqon kartaa a bulshada post-shaqada, laakiin waa in aynaan ka cabsan
Wasiirka shaqada, Michaelia Cash, soo saaray warbixin ku saabsan Friday shir Australian Computer Society ee.
Cash ayaa lagu sheegay warbixinta tusay "shaqooyinka qaar ka mid ah ciday ku noqon doonaa iswada sanadada soo socda, laakiin isbedelka farsamada hagaajin doonaa qaar kale oo sidoo kale la abuuro shaqooyin iyo fursado cusub".
"Mustaqbalka ma noqon doonto oo ku saabsan dadka ku tartamaya makiinado, waxa ay noqon doontaa ah oo ku saabsan dadka isticmaalidda mishiinada iyo shuqulka waa u xiiso badan oo gudanaysa,"Ayay tiri.
Warbixintu waxay tilmaamaysaa lix ahee-rogga ee shaqaalaha, ugu muhiimsan ee taas oo ah "qarax ee isku xirnaanta qalab, Muga xogta iyo xawaaraha Kombuyuutarada, weheliso horumarka degdeg ah in nidaamka iswada iyo sirdoonka macmal ah oo macnaheedu yahay in qalabka joofane si dhakhso ah u fuliyey hawlaha badan, ammaan ah oo waxtar badan dadka ".
qalabaynta la kordhiyo kicin doonaa kakanaanta ee hawlaha shaqaalaha. "Shaqooyin badan ayaa leh xirfad hoose lagu offshored ama iswada. natiijo waa suurtagalnimada ah xirfadaha iyo waxbarashada baar ku kiciyey inuu galo xirfadaha iyo shaqooyinka badan,"Ayaa lagu sheegay warbixinta.
shaqo ugu danbeysay on Earth: fikir dunida si buuxda u iswada - video
sayniska warbixin laga helay The, technology, injineernimada iyo xisaabta (stem) aqoonta waxaa loo isticmaalaa in 75% oo ka mid ah shaqooyinka ugu dhaqsiyaha badan u kordhaya iyo baroortay in "dhalinyarada Australia muujiyaan dhacaya xiiso iyo qaab Stem".
arrimuhu kale waa u kaca ah oo la filayo in aad iskaa u shaqeysato iyo freelancing keena dhufto ee faca-fadeed Upwork, Kaggle, Innoventive iyo Freelancer.com, kaas oo sheegaya warbixinta "bixiyaan qiimaha dhex sahlanaato, caqabadaha hooseeyo si entry iyo xawaaraha kordhay awood dadka inay u beddesho ay waqti free galay shaqo mushaari ah ".
Warbixintu waxay sheegtay in halka freelancing "aan weli qabsaday ee Australia, waa weyn a (oo sii kordhaya) model shaqo dalalka kale ", sida in America halkaas oo mid ka mid ah saddex shaqaalaha waa qandaraasle madax-bannaan.
Related: Eeloon Miski: baabuurta Tesla awoodaan in ay ka gudbaan US iyadoo malag hoggaamin midna ku lahayn laba sano noqon doona
Haddii shaqo ku haboon kajirin, Shaqaalaha ayaa u baahan kara in ay u abuuri, warbixinta soo jeediyay. "Xirfadaha ganacsi ay u badan tahay in ay sii kordhaysa muhiim u ah Aasaasayaasha ganacsiga yaryar iyo shaqaalaha ururada waaweyn,"Ayaa lagu yiri.
Warbixinta ayaa saadaaliyay warshadaha adeegga, gaar ahaan waxbarashada iyo daryeelka caafimaadka, ay sii wadi doonto in la wado shaqo abuuris, taasoo la micno ah "xirfadaha dhexgalka bulshada iyo sirdoonka dareenka noqon doonaa kordheysa muhiim ah".
Warbixintu waxay sheegtay in shaqaalaha Australia waxay noqon doonaan kala duwan, iyadoo mid ka mid ah shan Australiyaanku da'doodu ka weyn tahay 65 in 2035, dumar ka qaybgalka sare iyo tiro badan oo tahriibayaal ah isagoo ka mid ah da'da shaqada.
Warbixintu waxay sheegtay in isbeddellada shaqada ku dambayn doonta noocyada shaqo cusub, iyo warar xan ah, kuwaas oo ka mid noqon kara "weyn falanqeeyayaasha xogta weyn", Falanqeeyayaasha adag taageero go'aanka, wadayaasha baabuurta meesha fog laga maamulo, khubaro waayo-aragnimo macaamiisha, gargaarayaasha caafimaadka ka hortagga ah iyo shakhsi-sugayaal online.
"Kororka baabuurta un-crewed siinayo kor u qaada shaqaale cusub doonniyawadayaashaada, wadayaasha iyo doonnida oo saraakiishii kan samada ka sameeyaan shaqadooda ma, badda ama miinada goobta, laakiin ka xafiis meel fog,"Ayaa lagu sheegay warbixinta.
Related: Maxay ka dhigan tahay in ay noqon aadanaha ee da'da technology?
Hadal uu shirka soo saarka shaqaale ah oo ku saabsan 8 December, Golaha Australian ah xoghayaha ururka shaqaalaha Dave Oliver digay "isbedel xad dhaaf ah lagu soo bandhigay horumarka tignoolojiyada hadda keentay in ay dubka sare ah, hollowing ballaaran oo dheeraad ah oo joogto ah ka mid ah suuqa shaqo ".
Waxa uu sheegay in warbixin dhawaan BMX tusay 5 milyan oo shaqo (40% shaqaalaha Australia) wajihi itimaalka sare oo lagu badalay kombiyuutarada badan soo socda 10 in 15 sano.
"Inkastoo faa'iidooyinka badan tiknolojiyada cusub, waxaan dooneynaa in ay ka fogaadaan slide si madal suuqa shaqada in ciidamada shaqaalaha inay dalab ka dhan ah midba midka kale, waayo, Baakadaha shuqul ah nooc ka mid ah arxan, beddeli xaraashka Arbacada-style,"Ayuu yiri Oliver.
Related: geesi- ee sirdoonka macmal: hanad, wuu hayn karaa jeeg?
"Hawsha u taalla oo dhan oo naga mid ah - ururada shaqaalaha, loo shaqeeyaha, nidaamiyo iyo dawladaha - waa in macrifada fursadaha farsamada oo waxaan ka dhigi shaqeeyaan, halkii ay ka soo horjeedo, danaha ugu fiican shaqaalaha,"Ayuu yiri.
Cash sheegay "in ka badan abid, waxbarasho iyo tababar ay muhiim u yihiin guusha ee suuqa shaqada. By 2019, tirada shaqooyinka laga heli karaa shaqada aadka loo xirfad leh waxaa lagu qiyaasay in uu noqon in ka badan laba jibaar tirada heli karaa 1991.
"Sidee lagu raaco shaqaalaha Australia ayaa muddo dheer ku xirnaan doontaa awoodda aan u leenahay si ay u caawiyaan shaqaalaha samaynayaan marxallad ay shaqooyin cusub oo ka wanaagsan. In dhibaatada ugu weyn wuxuu noqon doonaa si loo hubiyo in mid ka mid ah waa ay ka tageen,,"Ayay tiri.
28661	4 Qodobka, sirdoonka Artificial (AI), Australia news, siyaasadda Australia, Ganacsiga (Australia), CSIRO, Shaqaalaysiin, Michaelia Cash, News, Paul Karp, Robots, Technology, Work & xirfadaha
← Oogada Microsoft Book Review Jidka A meeldhexaadka ah in ay Qiimee Qalliin Maskaxda Bukaan- →